Grate Bar, Roller & Bearing, Nozzle, fitoeran'entana ho an'ny fitaovana fandoroana fako. Mpanamboatra sy mpamatsy - China Grate Bar, Roller & Bearing, Nozzle, fitoeran'entana ho an'ny fitaovana fandoroana fako. Factory
Famaritana ny vokatra: GRATE BAR & Roller: dingana iray izay alehan'ny mpanelanelana amin'ny alàlan'ny mpanelanelana amin'ny rano. Ny makarakara dia misy takelaka poaka maromaro vita amin'ny metaly. Ny takelaka tsirairay dia mitoetra eo amin'ny lovia manaraka. Ny fantsom-pifandraisana dia voalamina amin'ny lafiny iray amin'ny takelaka tsirairay ary ny fantsom-panafahana dia namboarina teo amin'ny ilan'ny takelaka tsirairay ho an'ny mpanelanelana. Ny takelaka tsirairay dia niampita ny fomban'ny singa tubular izay misokatra eo an-tampon'ny takelaka. P ...
Famaritana ny vokatra: fitoeram-pahefana dingana iray izay alehan'ny mpanelanelana amin'ny alàlan'ny mpanelanelana amin'ny therethrough. Ny makarakara dia misy takelaka poaka maromaro vita amin'ny metaly. Ny takelaka tsirairay dia mitoetra eo amin'ny lovia manaraka. Ny fantsom-pifandraisana dia voalamina amin'ny lafiny iray amin'ny takelaka tsirairay ary ny fantsom-panafahana dia namboarina teo amin'ny ilan'ny takelaka tsirairay ho an'ny mpanelanelana. Ny takelaka tsirairay dia niampita ny fomban'ny singa tubular izay misokatra eo an-tampon'ny takelaka. Ny rivotra voalohany dia ny ...
Famaritana ny vokatra: mitondra dingana iray izay alehan'ny mpanelanelana amin'ny alàlan'ny mpanelanelana amin'ny therethrough. Ny makarakara dia misy takelaka poaka maromaro vita amin'ny metaly. Ny takelaka tsirairay dia mitoetra eo amin'ny lovia manaraka. Ny fantsom-pifandraisana dia voalamina amin'ny lafiny iray amin'ny takelaka tsirairay ary ny fantsom-panafahana dia namboarina teo amin'ny ilan'ny takelaka tsirairay ho an'ny mpanelanelana. Ny takelaka tsirairay dia niampita ny fomban'ny singa tubular izay misokatra eo an-tampon'ny takelaka. Ny rivotra voalohany dia ...
Famaritana ny vokatra: Roller: dingana iray izay ahitra amin'ny alàlan'ny mpanelanelana izay mikoriana amin'ny therethrough. Ny makarakara dia misy takelaka poaka maromaro vita amin'ny metaly. Ny takelaka tsirairay dia mitoetra eo amin'ny lovia manaraka. Ny fantsom-pifandraisana dia voalamina amin'ny lafiny iray amin'ny takelaka tsirairay ary ny fantsom-panafahana dia namboarina teo amin'ny ilan'ny takelaka tsirairay ho an'ny mpanelanelana. Ny takelaka tsirairay dia niampita ny fomban'ny singa tubular izay misokatra eo an-tampon'ny takelaka. Ny rivotra voalohany dia su ...